हाइपोइड्रोसिस को कारण धेरै हुन सक्छ, यसैले थेरेपी बढने पसीटिंग को विकास को कारक को आधार मा चयन गरिन्छ। अत्यधिक पसीना को कारण एक विरासत भविष्यवाणी हुन सक्छ, पहिले चोट र बीमारियों, तनाव र तंत्रिका विकारहरु को सामना गरे।
हाइइफ्रिड्रोस को प्रभाव को खत्म गर्न को लागि, Teimurov मल प्रयोग गरिन्छ, जो यसको कम लागत मा उत्कृष्ट सुखाने र गुणहरु disinfecting छ। ल्याटिन नाम तयारीहरू पास्ता तेमेरोभो हुन्। मा
सुन्तला को रचना सोडियम tetraborate, बोरिक र नमलीय एसिड, समाधान शामिल छ
फर्मलहाइड, टेल, सीड एसीटेट, टकसाल तेल र ग्लिसरीन।
दबाइले फेफड़ों रोगहरूको घटनालाई रोक्छ, डायपर रश र पिलाउने स्पटहरू मेटाउँदछ, पसीनाको दुखाइको अप्रिय गंधलाई बेवास्ता गर्छ । टिममोरोवा स्यान्ट सेतो रङको चिपचिपा समूह हो, जसमा मार्गहोको चिल्लो गन्ध छ। ड्रगको लागि उद्देश्य हो
खुट्टामा अनुप्रयोग, तर फ्रेमहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। केवल
यस मामला मा शर्त को नमी को उपयोग को पछि लागी हुनु पर्छ
डर्मेटाइटिसको विकासलाई रोक्न मन लाग्छ। सुन्न प्रभावमा लागू हुन्छ
एक दिन वा दुई पटक एक पतली पत्र राख्नुहोस्। टिममोरोभ पिरोइन रातभर लागु गरिएको छ
पूर्व-धोएको खुट्टामा। बिहान यो प्रयोग गर्न योग्य छ
दुर्गन्ध र लोशन। आवेदनको कोर्स कम्तिमा दुई हप्तामा हुनुपर्दछ। पुन: प्राप्ति पुरा गर्न ग्यारेन्टी छैन, तर औषधीले कम गर्न मद्दत गर्दछ
स्वेटर। प्रक्रियाको मार्ग पछि, बिरामीहरू सामान्य दुर्गन्धमा फर्कन सक्छन्। यदि मलमले मद्दत गर्दैन, त्यस पछि परामर्श पछि
चिकित्सक-डार्मोटोलोजस्ट, तपाईले अधिक कट्टरपन्थी साधनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Hyperhidrosis Botox को इंजेक्शन संग एक सर्जिकल ओपरेशन संग व्यवहार गरिन्छ।
Ointment Teymurova, जो contraindications को लागि अनुदेश को एक धेरै हानि छ। चिकित्सीय प्रभाव केवल रोगी को आधामा मात्र मनाईन्छ।
यसको अतिरिक्त, मा बनावट formaldehyde र नेतृत्व एसीटेट, जो समावेश गर्दछ
शरीरमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। धेरै युरोपेली देशहरूमा, टिमिमोभको इन्टन्ट, जुन सँधै सकारात्मक छैन, को लागि अनुमति छैन
प्रयोग गर्नुहोस्। त्यस्ता समस्याहरू छन् जब यो उपकरणको प्रयोग हुन्छ
डर्मेटाइटिस र छाला जलनसम्म पुग्यो। लागूपदार्थको कमजोरी हुन सक्छ
कैरिरी र तथ्य यो छ कि उसले कपडे दागहरु र टाउकोको छेउमा छाड्छ,
जो एक अस्पष्ट उपस्थिति को नेतृत्व गर्दछ। टेममोभो सुन्तला सस्तो र सरल छ
उपचारको तरिका, तर अपेक्षाकृत प्रभावकारी। दबाइ को लागी कमजोरी को सम्भावना र हाइपर हेर्रोइडिस को एक कमजोर रूप को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ, जो एक सानो स्थानीयकरण छ। एक मजबूत पसीने संग, यो एन्टिपार्सेन्ट्स को पानी को आधार मा प्रयोग गर्न को लागि सिफारिश गरिन्छ, कपडे मा कुनै दाग छोडने र दक्षता को वृद्धि गर्न को लागि।
यो नर्सिंग मातृहरु, गुर्दे को विकारहरु, गर्भवती महिलाहरु, नयाँ बच्चाहरु सहित बच्चाहरु, र ड्रगको व्यक्तिगत घटक को व्यक्तिगत असहमति संग रोगहरु को लागि मर्खन को प्रयोग गर्न को सिफारिश छैन। सुन्तला शरीरको ठूला क्षेत्रहरूमा लागू हुँदैन। लागूपदार्थको लामो समय सम्मको प्रयोग र बिरामीको साथमा रोगहरु मा अधिक मात्रा संग
गुर्दे समारोहले तीव्र र पुरानो जहरीय प्रतिक्रियाहरू विकास गर्न सक्छ
हानिकारक कार्य। साइड इफेक्ट उल्टी हुन सक्छ, नली,
भ्रम, सिरदर्द, क्रान्ति र ओलिगुरिया, जब अचानक
उत्तेजित मूत्र को मात्रा घटाउँछ। दुर्लभ अवस्थामा, त्यहाँ झटका हुन सक्छ
अवस्था। 50 ग्राम को भोल्युममा डिब्बे वा ट्यूबहरूमा लागू औषध उत्पादन गर्दछ। भण्डार भण्डार गर्नुहोस्
एक स्थानमा टेरमोरोवले सूर्यबाट सुरक्षित राखेको छ।
गर्भावस्था, lactation र यसको योजना समयमा Multivitamins 'Aevit'। अवलोकन
ग्लिसरिन - के यो छ? ग्लिसरोलको रचना। औषधिमा आवेदन
तर "Argosulfan": निर्देशन, समीक्षा
फार्मेसी मा टेस्टोस्टेरोन: मूल्यहरु को एक समीक्षा। टेस्टोस्टेरोन तयारी समीक्षा
Adenoids तीव्र: कारणहरू, निदान, लक्षण र उपचार
पुस्तक प्रकाशन मास्को: ठेगाना सूची
बुना crochet रूमाल बस र शानदार देखिन्छ!
के तपाईंलाई थाहा छ, एक रोटी गरेको दर्जन - यो कति छ?
Alena Vinnitskaya: ताराहरू गर्न चढाई
पी को संख्या - गणितीय पहेली
Tatishchev स्मारक (Togliatti)। सृष्टिको इतिहास